ဆိုးလ်ရှားဟာ ကစားသမား နှစ်ဦးကို သတ်နေတယ်လို့ အကြီးအကျယ် ထိုးနှက် စွပ်စွဲလိုက်တဲ့ အိုဟားရား - xyznews.co
ဆိုးလ်ရှားဟာ ကစားသမား နှစ်ဦးကို သတ်နေတယ်လို့ အကြီးအကျယ် ထိုးနှက် စွပ်စွဲလိုက်တဲ့ အိုဟားရား
တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစား သမားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျေမီ အိုဟားရားက ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားဟာ အသင်းရဲ့ ကစားသမား နှစ်ဦးကို ပွဲထွက်ခွင့် မပေးပဲ သတ်နေတယ်လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်် စွပ်စွဲ သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တုန်းက အေဂျက် အသင်းမှ ကွင်းလယ်လူ ဒွန်နီ ဗန်ဒီ ဘိခ် ကို ပေါင် သန်း 40 နဲ့ ခေါ်ယူ ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ပွဲထွက်ခွင့်တွေကို လုံလောက်စွာ မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် နယ်သာလန် လက်ရွေးစင်ဟာ နိုင်ငံ့ အသင်းမှာတောင် ရွေးချယ် မခံရတော့တဲ့ အနေအထားတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒွန်နီ ဗန်ဒီ ဘိခ် ဆိုတာ အေဂျက် အသင်းအတွက် ကစားပေးခဲ့စဥ်တုန်းက နယ်သာလန် အခြေစိုက်ကလပ်ကို ချန််ပီယံလိဂ် ဆီမီး ဖိုင်နယ် အဆင့်အထိ ရောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်ခဲ့သလို Ballon D’ Or ဆန်ခါတင် စာရင်းထဲ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးလည်း ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဒါပေမဲ့ သူဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှာတော့ ပေါ့ဂ်ဘာ ၊ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် တို့ရဲ့နောက် အသင်းရဲ့ တတိယ ဦးစားပေး ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမား တစ်ဦးသာ ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပြီး လုံလောက်တဲ့ ပွဲထွက်ခွင့်တွေနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ အတွက် အသင်းပြောင်းဖို့ သတင်းကြီး သွားခဲ့ရပါတယ် ။
အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင််းဟာ ကာလရှည်ပစ်မှတ်ထားနေခဲ့တဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းမှ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ဂျေဒန် ဆန်ချိုကို ပြီးခဲ့တဲ့ နွေတုန်းက ပေါင် 73 သန်းနဲ့ ခေါ်ယူသွားနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ထို့အတူ ယူနိုက်တက်တိုက်စစ် ဒီရာသီမှာ ပိုကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံခဲ့ရပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ ဆန်ချိုဟာ အသင်းအတွက် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုမှ မလုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ပဲ ဂိုးသွင်းယူမှု ၊ ဖန်တီးမှု ကင်းမဲ့နေခဲ့တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးတော့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်းမှ ချန်လှပ််ခြင်းကိုပါ ခံခဲ့လိုက်ရပါတယ် ။ ဒါဟာ ပရိသတ်တွေ အတွက််တော့ တကယ့်ကို စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။
အခုတော့ ဆန်ချိုဟာလည်း ပွဲထွက် ကစားခွင့် မိနစ်တွေ ပျောက်ဆုံးနေရပြီး ကစားကွက် အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ စနစ်သစ်မှာ အရံလူ အဖြစ်သာ ပါဝင်ခဲ့ရပါတယ် ။ အကျိုးဆက် တစ်ခုအဖြစ် ဆန်ချိုဟာလည်း ဒီတစ်ကြိမ် အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ ကစားသမား စာရင်းမှာ မရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါဘူး ။
အခုတော့ တော့တင်ဟမ် ကွင်းလယ် ကစားသမားဟောင််း တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဂျေမီ အိုဟားရားက ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဆန်ချို ၊ ဗန်ဒီ ဘိခ် တို့ကို ပွဲထွက်ကစားခွင့်တွေ မပေးပဲ သတ်နေပြီလို့ အပြင်းအထန် ဝေဖန်စွပ်စွဲ သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီရာသီ အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး ဆင်ခြေတွေ မပေးခဲ့ကြပါဘူး ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆိုးလ်ရှား ကိုယ်တိုင် ထွက််လာခဲ့ပြီး ‘ ဆင်ခြေတွေ ပေးစရာ မရှိဘူး ၊ ငါတို့ အသင်း တစ်သင်း ပိုင်ထားပြီ ၊ ငါတို့မှာ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒို ရှိနေတယ် ၊ အင်အား တောင့်တင်းနေပြီ ‘ စသဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ် ”
” သူတို့တွေဟာ ဆန်ချိုကို ပေါင် သန်း 70 ကျော် ပေးပြီး ခေါ်ယူခဲ့ကြပါတယ် ။ သူဟာ ဆိုးလ်ရှား လက်အောက်မှာ ကစားခဲ့ရတဲ့ ပွဲကစားချိန် မိနစ်တွေအရ အခုတော့ အင်္ဂလန်် လက်ရွေးစင် ကစားသမားစာရင်းထဲကတောင် အထုတ်ခံ နေခဲ့ရပါပြီ ”
” ဒီဘဲက ကစားသမားတွေကို သတ်နေတာပါပဲ ။ ဒွန်နီ ဗန်ဒီ ဘိခ် ဆိုတာ Ballon d’ Or ဆန်ခါတင် ကစားသမား တစ်ဦးပါ ။ အခုတော့ သူဟာ ပွဲထွက် ကစားပေးခွင့်တောင်် မရရှိနိုင်တော့ပါဘူး ။ ဒါတွေက လွန်ကိုး လွန်နေပါပြီ ”
” အကယ်လို့ အဲ့တာက ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ဖြစ်နေခဲ့ရင် လူတွေက သူ့တံခါး ခေါက်ပြီး ‘ ဒီကစားသမားတွေကို ခင််ဗျား ဘာလုပ်နေတာလဲ ? ‘ ဆိုပြီး မေးမြန်းခဲ့ကြမှာပါပဲ ။ ဆိုးလ်ရှားကြောင့် ဆန်ချိုလည်း အင်္ဂလန် ကစားသမား စာရင်းထဲ မပါဝင်ရတော့ပါဘူး ။ ဒါက အဆင်ပြေမနေပါဘူး ” လို့ အိုဟားရား က ဝေဖန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ၀က်ဟမ်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အပြီးမှာ ပွဲအပေါ် များစွာ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲ့ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ၂ ခုကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ကလော့
Next Article ဟာလန်း နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ကလပ် ၊ ယူနိုက်တက် ကို လာလည်မယ့် လက်ဝှေ့အကျော်မော် ၊ ရာမိုစ့် ရဲ့ အနာဂါတ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်းအားကစား သတင်းများ